Sanduuqyada ATN - tani ayaa ilaa hadda dhacay - Android TV - Android TV News
Home · Android TV · Sanduuqyada ATN - tani ayaa ilaa hadda dhacay
Sanduuqyada ATN - tani ayaa ilaa hadda dhacayWaxaa la dhowaad todobaad ka hor, bilayska ayaa weeraray shirkada ka danbeeya sanduuqa ATN ee Malmo. Tani waxa ay ku dhacday:
Bilayska ayaa weeraray shirkad ee Malmo oo xiray saddex qof. Waxay la tuhunsan yahay jebinta copyright. shaqada Shirkadda waa in ay keenaan in channels TV shisheeye ka Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, iyo kobo iyo iyaga u qaybi macmiisha gaarka ah.
About 20 baabuurta booliska ka qayb qaatay weerarkaas in si nabad ah u baxay, sida ay markhaati.
Macmiil Company Malmo TV iibin dhex sanduuq la magaca ATN. Waxaa jira channels caan ah in ay adag tahay si aad u hesho iyada oo distributors Swedish. Kiiska of sports, madadaalada iyo news.
channels ayaa ay muhiim u yihiin dadka qaba qoyska iyo qaraabada tagay dalalka kale, ayuu yiri Maxamed Qadoura, mid ka mid ah dhibanayaasha, in SVT News Skåne.
- Gaar ahaan marka ay jirto dagaal iyo xasillooni ee Bariga Dhexe, waxaan u baahan nahay macluumaad badan oo.
The kun oo macaamiisha ahaa ka dib markii xiritaanka labada yaabay oo cun. Dad badan ma ay garan wixii dhacay. Qaar ka mid ah u beddelay si ay dukaan ATN ee Malmö halka kuwo kale ay isku deyayaan in ay u xaliyo dhibka.
Saddex shirkadood oo shisheeye TV ayaa la soo sheegay in ay shirkadda booliska Malmö. sheegashooyinka ay yihiin in ka badan 200 million, ayaa shaaca ka qaaday xeer Henrik Rasmusson:
- Si aad u eryi nooca ganacsiga aad leedahay si ay leeyihiin fasax laga channel kasta si retransmit. Waxaan dhihi lahaa in ay ku saabsan tahay ku dhawaad 2,000 oo janalada taleefishinka shirkadda ayaa soo diray, ayuu yiri.
weekend Tani faallo shirkadda ka danbeeya sanduuqa ATN ee tuhun dambiyeed markii ugu horeysay ee warbaahinta:
- Waxa laga yaabaa inaan ka dhigay hal ama laba qalad, laakiin inta badan channels our, waxaan heysanaa fasax, ayaa sheegay in xubin ka mid ah qoyska milkiilaha in SVT News Skåne.
Waxa uu sidoo kale sheegay in telefishanada ugu dhakhsaha badan mar kale bilaabi doonaa iyadoo la kaashanayo of lammaanaha qarsoodi dibadda.
- Muddo toban maalmood ah shixnado waa la mar kale ordaya on sanduuqyada television ATN, wuxuu u ballanqaaday.
Source: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/detta-har-hant-hittills-i-atn-fallet11.11.2016. 20:44	Categories